विप्लव कार्यकर्ता र प्रहरी बिच गोली हानाहान भएको प्रहरीको भनाई, ठूलो सङ्ख्यामा प्रहरी परिचालन ! — donnews.com
सङ्खुवासभा। नेक्रबिक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का कार्यकर्ताहरुसँग सङ्खुवासभा चैनपुर नगरपालिका वडा नं. ४ मैदानेमा प्रहरीसँग जम्काभेट हुँदा झडप भएको प्रहरीको भनाई छ । आज विहान ११ बजे गस्तीमा रहेको टोलीसँग प्रतिबन्धित नेकपाका कार्यकर्ताहरुको आमने–सामने भएको थियो । संखुवासभाका प्रहरी प्रमुख नवराज मल्लका अनुसार दोहोरो फायरिङ भएपछि नेकपाका कार्यकर्ताहरु त्यहाँबाट भागेका थिए ।
नियमित गस्तीमाथि नेकपाका कार्यकर्ताले पहिले गोली प्रहार गरेपछि जवाफी फाइरिङ खोल्नुपरेको प्रहरीको भनाई छ । दुवैतर्फको गोली हानाहानबाट कुनै पनि मानवीय क्षति नभएको प्रहरी प्रमुख मल्लले बताए । यस विषयमा नेकपाको तर्फबाट घटना के कसरी भएको हो वा घटनाको वास्तविकता के हो भन्ने कुनै पनि तथ्य अहिलेसम्म बाहिर आएको छैन ।
ठुलो संख्यामा प्रहरी परिचालन
त्यस क्षेत्रमा ठूलो सङ्ख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सङ्खुवासभाले जनाएको छ । घटनास्थल मैदानेमा सशस्त्र र नेपाल प्रहरीसहित ५० भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी खटाइएको प्रहरी प्रमुख मल्लले जानकारी दिएका छन् ।
घटनास्थलमा सशस्त्र प्रहरी अरुण गुल्म चैनपुर र इलाका प्रहरी कार्यालय चैनपुरबाट थप सुरक्षाकर्मी पुगेका छन् । घटनास्थल आसपास सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर नेकपाका कार्यकर्ताको खोजी तीव्र पारिएको र अहिलेसम्म कोही फेला नपरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीवनप्रसाद आचार्यले बताएका छन् ।